“Afrika sy ny Tononkalom-baovao”: Nanao Karajia Twitter Ho An’ny Tononkalo Manerantany Ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Marsa 2018 8:58 GMT
Nwachukwu Egbunike, mpitantana ny Fiarahamonina Global Voices Atsimon'i Sahara no nandrindra ny resadresaka niaraka tamin'i Amanda Leigh Lichtenstein (Etazonia/Zanzibar), Njeri Wangari Wanjohi (Kenya) ary Dami Ajayi (Nizeria).
Niasa tamin'ny hetsika fiarovana ny kanto ara-literatiora tao Zanzibar, Ethiopia, ary tao Etazonia i Lichtenstein (@travelfarnow), mpanoratra sy poeta mahaleotena. Wanjohi (@kenyanpoet) kosa dia poeta Kenyana malaza sady mpanao gazety. Namoaka ny andian-tononkalony faharoa mitondra ny lohateny hoe A Woman's Body is a Country na “Firenena iray ny vatan'ny vehivavy iray” i Ajayi (@ajayidami), dokotera mpitsabo Nizeriana. Poeta nivoaka miaraka amin'ny angona tononkalo vao haingana mitondra ny lohateny hoe Blazing Moon i Egbunike, avy any Nizeria ihany.
Manomboka amin'ny 7 ora hariva (Ora ao Afrika Andrefana) amin'ny Alarobia 21 martsa ao amin'ny Twitter ny karajia ary mampiasa ny teny famantarana ny Global Voices Atsimon'i Sahara @gvssafrica. Ny fifanakalozan-kevitra dia hifantoka amin'ny fifandraisana eo amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny poezia miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny kaontinanta Afrikana.
Manerana ny kaontinanta Afrikana, ireo fikambanana toy ny Chimurenga sy Badilisha Poetry X-Change (Afrika Atsimo), Soma: Fialam-boly, Kolontsaina, sy Fianarana (Tanzania), Kwani Trust (Kenya), Ny Fetiben'ny Boky Port Harcourt, Fetiben'ny Boky Ake, Fetiben'ny Kanto sy Boky Lagos (Nizeria), Foaran'ny Boky Iraisampirenena Hargeysa (Somaliland) ary ny Writivism (Oganda) no ohatra vitsivitsy monja amin'ireo fikambanana manerana ny kaontinanta izay manoka-tena amin'ny fampiroboroboana ny fiteny, ny literatiora ary ny kolontsain'ny vakiteny.
Nahitana fitomboana ny isan'ny atrikasa, fetibe, vakiteny, famoahan-dahatsoratra sy seminera natao hamoronana kolontsaina ara-literatiora matanjaka indrindra manerana ny kaontinanta tao anatin'ny folo taona farany. Mankasitraka am-pahavitrihana ny fiaviana lalin'ny tononkalo ao amin'ny kaontinanta sy ny heriny tsy manam-paharoa ireo poeta sy mpanoratra mba hanamafy orina ny demaokrasia, hanohitra ny toe-javatra, ary hiaro ny fahalalaham-pitenenana.
Manohy mamerina ny hevitra ‘ ‘poeta toy ny vavolombelona” ny mpanao gazety, mitatitra ny toetra lalindalina kokoa, voatapoka sy mampihetsi-po kokoa an'ireo tantara ao ambadiky ny lohatenim-baovao sy ny vaovao misongadina.
5 andro izayMediam-bahoaka